China Industrial aluminium profil famokarana sy ny orinasa | Huajian
Aluminium Window & Series Series
Mombamomba ny alimina indostrialy, fantatra koa amin'ny hoe: fitaovana fitrandrahana alimina indostrialy, piraofilina alimika indostrialy. Ny mombamomba ny alimina indostrialy dia fitaovana firaka misy aliminioma ho singa lehibe indrindra. Ny tsorakazo aliminioma dia azo alaina amin'ny endriny miampita hafa amin'ny alàlan'ny fanalefahana sy fandroahana mafana. Na izany aza, ny ampahany amin'ny firaka nampiana dia tsy mitovy, noho izany ny fahasamihafana mekanika sy ny sehatry ny fampiharana ny profil aluminium indostrialy dia samy hafa ihany koa. Amin'ny ankapobeny, ny piraofilina alimina indostrialy dia manondro ireo mombamomba ny aliminioma rehetra afa-tsy ireo izay manamboatra varavarana sy varavarankely, rindrina ambainy, ravaka anatiny sy ivelany ary rafitra fananganana.
Ankehitriny, ny zana-kazo alimo alimina Huajian dia mibahana ny ankamaroan'ny tsenan'ny indostria ary manolo ny fanjifana vy be dia be. Fa maninona no malaza be ny mombamomba ny firaka aliminioma? Tianay ny manadihady ny tombotsoan'ny mombamomba ny aluminium raha ampitahaina amin'ny vy.
1.Fisehoana: Misy fomba fitsaboana amin'ny alàlan'ny alim-bolan'ny aliminioma, toy ny anodizing, poloney simika, famafazana fluorocarbon, firakotra elektroforetika, sns. Ny tarehy dia tsara tarehy ary afaka mifanaraka amin'ny tontolo samihafa misy fiantraikany amin'ny harafesina mafy.
Amin'ny ankapobeny ny vy dia mampiasa galvanizing mafana, famafazana ny etana, firakotra loko, sns. Ny fijery dia ambany noho ny mombamomba ny aliminioma. Izy io koa dia ambany noho ny profil aluminium momba ny fanoherana ny harafesina.
2. Fizarana lakroa samihafa:
Ny fomba fanodinana ankapobeny ny mombamomba ny aliminioma dia misy ny extrusion, casting, bending, stamping, sns. Ny famokarana extrusion no fomba famokarana mahazatra ankehitriny. Amin'ny alàlan'ny fanokafana ny die extrusion, azo atao ny mamokatra mombamomba ny cross-sectional, ary haingana dia haingana ny hafainganam-pamokarana.
Matetika ny vy dia mampiasa fomba mihodina, manary, miondrika, manisy tombo-kase ary fomba hafa. Amin'izao fotoana izao, ny familiana no fomba famokarana mahazatra hamokarana vy vita hatsiaka. Ny fizarana miampita dia mila ahitsy amin'ny fametahana kodiarana mihodina, fa ny milina ankapobeny dia tsy afaka mamokatra vokatra mitovy amin'izany aorian'ny famolavolana azy. , Ampifanarahana ny habeny, ary ny endrika miampita dia tsy azo ovaina, toy ny vy miendrika C, vy miendrika Z ary tsanganana miampita hafa. Ny fomba famokarana mihodina dia miorina ary ny hafainganam-pandeha dia somary haingana.
1. Fanodinana fitaovana
Ny vidin'ny fikojakojana ny firafitry ny vy dia mitombo 3% isan-taona, ary ny fonon'ny firafitry ny alimo dia tsy mila fikojakojana sy fikojakojana, ary ny akora vita amin'ny aliminioma dia mbola manana taham-panarenana 65% aorian'ny 30 taona. Ny vidin'ny aliminioma dia antenaina hampiakatra 3% isan-taona. Rehefa afaka 30 taona, dia potika vy tsy misy famerenam-bidy izy io amin'ny ankapobeny.
Amin'izao fotoana izao, ny fomba lehibe fanoherana ny harafesin'ny bracket dia vy mafana 55-80μm, ary ny aliminioma alimina dia 5-10μm.
Ny firaka aliminioma dia ao amin'ny faritry ny passivation ao amin'ny tontolo iainana, ary misy sarimihetsika oksida matevina miforona eo amboniny, izay manakana ny velaran'ny matrix aluminium mavitrika tsy hifandray amin'ny atmosfera manodidina, noho izany dia manana fanoherana tsara ny harafesina ary ny tahan'ny harafesina mitombo amin'ny fotoana. Amin'ny toe-javatra mahazatra (tontolo C1-C4), ny hatevin'ny vy vy nandrisika 80μm dia azo antoka fa azo ampiasaina mandritra ny 20 taona mahery, fa amin'ny faritra indostrialy misy hamandoana avo na ranomasina masirasira ary na ranomasina mafana aza dia mihombo ny tahan'ny harafesina . Ny vola dia tokony ho 100μm, ary mila tazonina tsy tapaka isan-taona.
Ohatra: fanadihadiana ny raharaha solar Photovoltaic
(1) Ny mombamomba ny aliminioma dia mavesatra ny lanjany, tsara tarehy ny bika, ary tena tsara amin'ny fanoherana ny harafesina. Ampiasaina matetika ao amin'ny tobin'ny herinaratra an-trano izy ireo ary tontolo iainana manimba izay manana fepetra takiana amin'ny enta-mavesatra.
(2) Ny vy dia manana tanjaka avo sy fanodikodinana kely ary fanovana rehefa eo ambany enta-mavesatra. Ampiasaina matetika ho an'ny tobin-herinaratra tsotra na ho an'ny singa manana hery lehibe izany.
(3) Vidiny: Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny tsindry tohanan'ny rivotra dia 0.6kN / m2, ny halavany dia ambany noho ny 2m, ary ny vidin'ny fonosana firaka alimina dia 1.3-1.5 heny noho ny fonosana vy. Amin'ny rafitra kely, (toy ny tafo vy miloko) Ny elanelam-bidim-bidy eo amin'ny fonosana firaka aliminioma sy ny firafitry ny vy dia somary kely ihany, ary ny firaka aliminioma dia maivana kokoa noho ny vy vy amin'ny lanjany, noho izany dia mety tsara amin'ny tampon-trano tobin-herinaratra.
Manaraka: Mombamomba ny alim-baravaran'ny rindrina
Mombamomba ny alim-baravaran'ny rindrina
Mombamomba ny alimina fiara